Paul wɔ Makedonia ne Greece (1-6)
Wonyan Eutiko wɔ Troa (7-12)
Wofii Troa kɔɔ Mileto (13-16)
Paul ne Efeso asafo mu mpanyimfo hyiae (17-38)
Ɔkyerɛkyerɛe wɔ afi afi (20)
“Ɔma mu wɔ anigye pii” (35)
20 Bere a basabasa no ano brɛɛ ase no, Paul soma kɔfrɛɛ asuafo no. Afei ɔhyɛɛ wɔn nkuran, na ɔne wɔn dii nkra, na osii kwan so kɔɔ Makedonia. 2 Na okyinkyin hɔ, na ɔkaa nsɛm bebree de hyɛɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no nkuran. Owiei no, ɔbaa Greece. 3 Odii abosome abiɛsa wɔ hɔ, na ɔresan akɔ no, ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔfa Makedonia mmom, efisɛ bere a ɔrebɛkɔ Siria no, Yudafo no bɔɔ ne ho pɔw.+ 4 Wɔn a na wɔka ne ho ne Beroiani Piro ba Sopata, Aristarko+ ne Sekundo a wɔyɛ Tesalonikafo, Derbeni Gaio, Timoteo,+ ne Tikiko+ ne Trofimo+ a wofi Asia mantam mu no. 5 Saa mmarima yi dii kan, na wɔkɔtwɛn yɛn wɔ Troa; 6 na Paanoo a Mmɔkaw* Nnim+ nna no akyi no, yɛtenaa hyɛn mu faa po so fii Filipi. Nnanum akyi no, yɛkɔtoo wɔn wɔ Troa, na yedii nnanson wɔ hɔ. 7 Da a edi kan wɔ nnawɔtwe no mu no, na yɛahyiam sɛ yɛrebedidi. Ɛnna Paul fii ase kasa kyerɛɛ wɔn, efisɛ ade kye a, na obefi hɔ. Na ɔkasae ara kosii anadwo dasum. 8 Enti na akanea pii wɔ abansoro dan a yɛahyia wom no mu. 9 Bere a Paul gu so rekasa no, na aberante bi a wɔfrɛ no Eutiko te mfɛnsere no ano. Aberante no faa mu dae hatee, na nna no nti, ofii abansoro a ɛto so abiɛsa no so bɛhwee fam, na bere a wɔmaa no so no, na wawu. 10 Na Paul sian kɔɔ fam kobutuw no so, na ɔbam no+ kae sɛ: “Munnyae gyegyeegye no, na onwui.”*+ 11 Afei Paul foroo abansoro no, na ɔfaa aduan,* na ofii ase dii. Na ɔtoaa so bɔɔ nkɔmmɔ ara koduu ahemanakye, na afei ofii hɔ kɔe. 12 Enti wɔde aberante no kɔe, na wonyaa awerɛkyekye kɛse sɛ wɔanyan no aba nkwa mu. 13 Na yɛfaa po so hyɛn, na yɛkɔɔ Aso sɛ yɛrekɔfa Paul. Efisɛ na wadi kan aka akyerɛ yɛn sɛ ɔbɛnantew akɔ hɔ, enti yenhyia no wɔ hɔ na yɛmfa no. 14 Enti bere a ɔne yɛn hyiae wɔ Aso no, yɛfaa no ne no kɔɔ Mitilene. 15 Bere a ade kyee no, yetu fii hɔ, na yekoduu Kio mpoano, na da a edi hɔ no, yɛkɔɔ Samo, na ade kyee no, yekoduu Mileto. 16 Ná Paul ayɛ n’adwene sɛ ɔrennyina Efeso,+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrensɛe bere biara wɔ Asia mantam no mu. Efisɛ na ɔrepɛ ntɛm, na sɛ ɛbɛyɛ yiye a, wakodu Yerusalem+ ɛda a wodi Pentekoste Afahyɛ no. 17 Bere a ɔwɔ Mileto no, ɔsoma kɔɔ Efeso kɔfrɛɛ asafo mu mpanyimfo no. 18 Wɔbaa ne nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Efi da a edi kan a mebaa Asia mantam mu+ no, mo ara munim sɛnea mebɔɔ me bra wɔ mo mu, 19 sɛnea mede ahobrɛase kɛse*+ ne nisu som Awurade, ne sɛnea pɔw a Yudafo no bɔe nti, mefaa sɔhwɛ pii mu no. 20 Nneɛma a mfaso wɔ so* biara, meka kyerɛɛ mo; mamfa ansie mo. Na mekyerɛkyerɛɛ mo baguam+ ne afi afi mu.+ 21 Na midii adanse frenkyemm kyerɛɛ Yudafo ne Greecefo sɛ, wɔnsakra wɔn adwene+ na wɔmmra Onyankopɔn nkyɛn, na wonnye yɛn Awurade Yesu nni.+ 22 Afei hwɛ! honhom no ahyɛ me, enti merekɔ Yerusalem. Ɛwom, minnim nea ɛbɛto me wɔ hɔ, 23 nanso nea minim ara ne sɛ, kurow biara mu no, honhom kronkron no kɔ so di me adanse sɛ wɔde me bɛto afiase, na amanehunu da hɔ retwɛn me.+ 24 Nanso, me ara me nkwa* ho nhia me pii.* Nea ehia me ne sɛ mewie mmirika a meretu no,+ na mawie ɔsom adwuma a minya fii Awurade Yesu hɔ no. Ɛne sɛ medi Onyankopɔn adom ho asɛmpa no ho adanse frenkyemm. 25 “Afei hwɛ! Minim sɛ mo a mekaa Ahenni no ho asɛm kyerɛɛ mo no, obiara renhu m’anim bio da. 26 Enti miyi mo adansefo nnɛ da yi sɛ, minni fɔ wɔ onipa biara mogya ho,*+ 27 efisɛ nea Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ* nyinaa, meka kyerɛɛ mo; mamfa ansie mo.+ 28 Momma mo ani mmra mo ho+ ne nguankuw no nyinaa so, efisɛ honhom kronkron no apaw mo ahwɛfo+ wɔ wɔn mu, sɛ monhwɛ Onyankopɔn asafo+ a ɔde ɔno ara ne Ba mogya+ tɔe no so yiye. 29 Minim sɛ mekɔ a, mpataku bɔne* bɛba mo mu,+ na wɔrenyɛ nguankuw no brɛbrɛ, 30 na mo ara mo mu na mmarima bɛsɔre, na wɔbɛkasa akyinkyim nsɛm de atwe asuafo no adi wɔn akyi.+ 31 “Enti monwɛn, na monkae sɛ mfe abiɛsa ni,+ awia ne anadwo, mede nisu tuu mo mu biara fo; mannyae da. 32 Afei mede mo hyɛ Onyankopɔn nsa, na mede mo hyɛ asɛm a efi n’adom mu no ase. Saa asɛm no betumi ahyɛ mo den, na ama moanya agyapade wɔ wɔn a wɔatew wɔn ho nyinaa mu.+ 33 M’ani mmeree obiara dwetɛ anaa sika kɔkɔɔ anaa ataade.+ 34 Mo ara munim sɛ, nsa yi na ama manya nea mihia,+ na ɛno ara nso na ama wɔn a wɔka me ho no anya nea wohia. 35 Biribiara mu, mede me nneyɛe ama moahu sɛ, ɛsɛ sɛ moyɛ adwumaden+ de boa wɔn a wɔyɛ mmerɛw no. Na ɛsɛ sɛ mokae asɛm a Awurade Yesu ankasa kae yi: ‘Ɔma mu wɔ anigye pii+ sen ogye.’” 36 Bere a ɔkaa eyinom wiei no, ɔne wɔn nyinaa buu nkotodwe, na wɔbɔɔ mpae. 37 Nokwarem no, wɔn nyinaa sui yiye, na wɔbam Paul,* na wofew n’ano. 38 Na nea ɛyɛɛ wɔn awerɛhow paa ne asɛm a ɔkae sɛ wɔrenhu n’anim bio no.+ Na wokogyaa no kwan kɔɔ po so hyɛn no mu.
^ Anaa “ne kra wɔ ne mu.”
^ Nt., “obubuu paanoo.”
^ Anaa “ahobrɛase adwene.”
^ Anaa “Nneɛma a ɛbɛboa mo.”
^ Anaa “mimmu me nkwa sɛ ade a ɛsom bo.”
^ Anaa “me ho afi wɔ nnipa nyinaa mogya ho.”
^ Anaa “efisɛ Onyankopɔn agyinatu.”
^ Nt., “wɔtɔɔ Paul kɔn ho.”